Ary ny sasany amin'ny fanehoan-kevitra netiquette tao amin'ny Apg29
Christer Åberg toy ny emoji.
Tsy mampino araka ny Mety ho toa, misy vitsivitsy (Note: vitsy) izay mahita foana nitokana teny an-lamaody filaharana fa toa tsy toy ny fiovana.
Ary ny sasany amin'ny fanehoan-kevitra netiquette tao amin'ny Apg29.
1️⃣ tsara indraindray ny olona tonga loggerheads ao amin'ny fanehoan-kevitra. Ny toro-hevitra dia ny tsy manomboka miresaka sy mandeha manohitra samy. Manoratra ny hevitrao ianao, dia tsara.
Hitondra izy ireo tsirairay ny fomba te-ho raisina, raha tsy izany tsy misy fampiasana hanoratra na inona na inona.
2️⃣ manao zavatra tsy mety ao amin'ny fanehoan-kevitra, dia afaka hilaza amiko. Comments fanehoan-kevitra io fanontaniana io foana deletade valisoa amin'ny alalan'ny fanaovana ny deletade. Apg29 tsy manazava ny antony mahatonga ny fanehoan-kevitra dia deletad. Izany dia tokony ho tena fahalalana.
3️⃣ Raha te-hitsikera Apg29 na hiresaka ny momba ahy (Christer Åberg), afaka manao izany ianao na aiza na aiza-kafa, fa tsy eto.
4️⃣ Raha efa nangataka tao amin'ny onony sy ny ho tia filaharana ho avy indray sy fanehoan-kevitra, dia izany ihany no ho anareo ny mitandrina ny tsara Netiquette 🙂.
5️⃣ propagating ratsy fampianarana mazava ho azy fa tsy nahazo. Mpaneho hevitra izay manao izany dia deletade sy nampanantena ny antonony eo amin'ny filaharana.
6️⃣ mpaneho hevitra izay vao mandeha manohitra izay voasoratra ao amin'ny lahatsoratra dia afaka manao izany na aiza na aiza-kafa, fa tsy eto.
7️⃣ Mazava ho azy, tsy misy tsy ara-dalàna lazaina.
❗️ mampino araka Mety ho toa, misy vitsivitsy (Note: vitsy) izay mahita foana nitokana teny an-lamaody filaharana fa toa tsy toy ny fiovana.
❤️ Fa misaotra anareo rehetra izay tsara hendry ary manoratra fanehoan-kevitra tena tsara amin'ny feo feno fitiavana sy famonjena ho an'ny maso! Hianao no nahary ny tena tsara ao amin'ny rivo-piainana Apg29 ka namelatra tena ankasitrahana!
✔️ ireo fitsipika mazava ho azy bönesidan koa. Fa aoka ho fantany fa misy bönesida ary tsy misy lahateny pejy na "Printer pejy". Na inona na inona izay tsy vavaka na tacksägelseämnen deletas.
✔️ tsy milaza ny olona amin'ny alalan'ny fanomezana anarana ny anarana feno, ary izany dia mihatra ny soratra.
✔️ Klagoböner, valifaty vavaka sy hatböner dia mazava ho azy fa tsy tonga soa.
✔️ Mba manana ny famonjena ny masonao rehefa mandefa amin'ny bönämnen.
Raha manan-kolazaina momba ny toro lalana kristianina efa mipetraka amin'i koa dia manorata anay e-mail mpamaky! Ny mailaka dia tokony ho 300, fara fahakeliny, ny teny, fa kokoa 500 na mihoatra. Mijoroa ho vavolombelona momba an'i Jesoa, ny famonjena, ny batisa, ny batisa ao amin'ny Fanahy, dia namaly vavaka sy miara-mandeha amin'i Jesosy. Tena ilaina amin'izao andro iainantsika in!
Azonao atao ny e-mail mivantana ny mpamaky pirinty Apg29 na e-mail ity endrika .
Tsarovy fa mpamaky sy ny fanehoan-kevitra mailaka manana ny heviny. Raha ny voasoratra hevitra fa tsy mitovy, tsy afaka ny hanome tsiny ahy noho izany! "Guilt ny fikambanana" ( Fikambanan'ny ny trosa ) dia tsy tafiditra eto!
Izany koa dia mihatra amin'ny lahatsoratra sy lahatsary izay tsy atao amin 'ny alalako, na raha dinidinika amin'ny olona iray ao amin'ny efitra fandraisam-peo fa tsy mitovy hevitra amin'ny.
Ahoana anefa no faly aho fa ianao sy ny maro hafa mitsidika ny bilaogy toerana Apg29 sy hijery ny fandaharana isan-karazany velona!
Zarao ireo faly ny maro hafa fa foronina azo atao!
Andriamanitra anie hitahy anao be dia be ary tena tsara izany!
V 03, onsdag 20 januari 2021 kl 02:22